Dhowr jeer aad laga yaabo in ay maqleen oo ku saabsan Samsung celi Code, xilli la isticmaalay sida Master celi Code. Qaybtan, waxaad baran doontaa oo fahmaan waxa Samsung Warbixannada Code waa dhan oo ku saabsan, sidaa daraadeed waa muhiim, iyo maxay tahay halista ka dambeeya waxaa la isticmaalayo? Later qaybtan sidoo kale waxaad ku baran doontaa sida loo isticmaalo Warbixannada Code Samsung ah oo kuwaas oo xaaladaha waxa loo isticmaali karaa?
Waa Maxay Samsung Warbixannada Code?
Samsung celi Code aka Master celi Code waa isku-dar ah asterisks (*), calaamadaha hash (#), iyo jilayaal tiro in marka la mariyo, adag resets ee Samsung telefoonada gacanta ama kiniin ah, sida telefoonka soo celiyaa la bixin kari warshad ay halka tirtiro oo dhan xogta ka. The code dib Samsung caadi ah oo dhan casriga ah Samsung laakiin waa mid gaar ah ay brand kaliya. Si kale haddii loo dhigo, xeerka dib Samsung ka shaqeeya oo keliya qalab Samsung oo haddii loo isticmaalo ee telefoonada gacanta ka nooc kasta oo kale, wax soo saarka Puntland waa waxba.
Sababtoo ah horumarka degdeg ah ee technology, code ka dib sayidkiisa casriga ah Samsung ayaa isbedelay, waa mid ku habboon saamaynayaa dhamaan noocyada cusub laga heli karo suuqa. Inkastoo Samsung code hore dib uma shaqeeyo ku daydo cusub, ee telefoonada ka weyn weli wuxuu noqon karaa dib u adag oo isticmaalaya code hore.
Xilligan aynu joogno waxaa jira saddex codes dib Samsung oo aad telefoon laga yaabaa in mid ka mid ah kuwan u shaqeeyaan. Saddexda codes dib Samsung waa:
• * 2767 * 3855 # loogu daydo phone Samsung cusub
• * 2767 * 2878 # loogu daydo phone Samsung cusub
• # * 7728 # loogu daydo phone Samsung jir
Waa Maxay natiijada Isticmaalka Warbixannada Code Samsung?
Jawaabta su'aashani waa mid fudud iyo mid sahlan. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad codsan code ka dib Samsung aad smartphone Samsung, telefoonka bilaabayso habka dib u adag ugala. Si kastaba ha ahaatee ka biyodiiday ee isticmaalaya code ah waa in aan marnaba bandhigayaa sanduuqa xaqiijin ama fariin digniin ah ka hor inta aan la bilaabin habka adag dib.
Tan iyo dad badan oo isticmaala Samsung aanay ka warqabin dhaqanka musiibo ah ee xeerka dib Samsung, ay kac ahayn aakhirka ku burburiyey dhammaan macluumaadka shakhsiyeed oo kaliya sababtoo ah ay doonayeen in ay hubiso haddii xeerka ahaa mid sax ah.
Taasi lagu sheegay, waxaa aad loogu talinayaa in si taxadar leh u isticmaal xeerka dib Samsung, oo had iyo macluumaad shakhsiyeed oo muhiim ah ee aad taleefan xoojiyaa in qalab gaar ah.
Sida loo isticmaalo Warbixannada Code Samsung?
Isticmaalka code ka dib Samsung ku Samsung telefoonada gacanta waa cadaalad ah oo fudud. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa:
1. Power on your smartphone Samsung.
2. Haddii mar hore laga heli karaa shaashadda Home ma, furo dhaansha Apps oo ka jaftaa icon Phone ah.
3. Haddii aadan horay waxaa, ka jaftaa doorasho rada ka sareysa.
4. interface rada ah, bilowdo khaanada Samsung code ka dib waa in lagu dabaqi karo telefoonka Samsung.
5. Caadi ahaan habka adag keddibna khadigtaa ama sida ugu dhakhsaha badan aad ku qor qof ee la soo dhaafay code dib ugu. Haddii aan samayn, aad ku sawirnaa button Wicitaanka si adag u bilaabi resetting aad casriga Samsung.
Baro More saabsan Samsung Hard celi Code
Sida kor looga hadlay, resetting aad casriga Samsung oo isticmaalaya code ka dib adag waa hab fudud oo ah mid aad u la mid khasaare oo kaliya in aysan u dhaliyay box xaqiijin si aad u raali kasta.
Sidoo kale, waxaad isticmaali kartaa furaha dib Samsung aad smartphone Samsung oo kaliya marka aad telefoon ku jiraa xaalad shaqada iyo awood u aqbalay gashiga aad siisaan. Xaaladdan oo telefoonka aan ka jawaabaya gashiga ama waxaa la joogto ah qufulan sabab u sabab kasta, hababka kale si adag dib telefoonka waa in la isticmaalaa.
Marka laga reebo xeerka sayidkiisii ​​dib in ay adag tahay resets ee telefoonada Samsung, waxaa jira dhowr codes kale oo aad ku qor kartaa si aad u heshid macluumaad kale oo la arki karo haddii kale ma / diyaar u ah dhamaadka isticmaala. Waxaa la soo jeediyay in aad isticmaasho codes kuwa kaliya marka aad pro ah ama aad leedahay aqoon qaar ka mid sare oo ku saabsan sida ay u shaqeeyaan taleefannada Android.
The codes kale oo lagu dabaqi karo oo ku saabsan telefoonada Samsung laga heli karaa links soo socda. Links waxaa ku jira qodobada qoray 'gurus' kale oo mobile ah oo aad siin kartaa qoto-dheer warbixin ku saabsan hab-dhaqameedkani:
Dhammaan Samsung Secrets Codes
Maqaalkani waxa uu qoray mid ka mid ah xubnaha sare ee XDA-Horumarinta. XDA-Horumarinta waa il aaminsantahay si aad u hesho haddii aadan dhameystiran, ugu yaraan inta badan macluumaadka ku saabsan qalabka Android oo uga faaidaysan, talooyin qarsoodi ah iyo tabaha si ay u qabtaan hawlo kala duwan marka la isticmaalayo nidaamka qalliinka Android.
Dheeraad ah oo halkan waxaad ka akhrisan kartaa: http://forum.xda-developers.com/galaxy-s2/general/samsung-secrets-codes-t2357184
Maqaalkani waxa uu ka kooban yahay codes badan oo qarsoodi ah in aad soo dejin kartaa smartphone Samsung si ay u qabtaan hawlo muhiim ah. Xaaladdan oo codes qaar ka mid ah ay ku guuldareysato inay ka shaqeeyaan model telefoonka aad, waxaad eegi kartaa comments posted by dhamaadka isticmaala. Comments badan ayaa ku jira macluumaad qiimo badan oo ku saabsan fulinta xeerka la beddelo ah characters yar halka aad qortid code ah.
Dheeraad ah oo halkan waxaad ka akhrisan kartaa: http://123techguide.blogspot.in/2012/01/samsung-mobile-secret-codes-list.html#axzz3efDGeQzW
Qaar ka mid ah Xeerarka faa'iido leh oo xiiso casriga
Waxaa jira codes badan oo caalami ah ee dabiiciga ah iyo la dili karaa casriga badan loo eegin iyaga saarayaasha ay. Maqaalkani waxa uu ka kooban yahay codes badan sida universal qarsoon casriga ah oo ay la socoto wax soo saarka ay siiyaan ama tallaabo ay qabtaan marka toogasho ah.
Dheeraad ah oo halkan waxaad ka akhrisan kartaa: http://www.smartmobilephonesolutions.com/content/some-useful-and-interesting-smartphone-codes
Inkastoo xeerka dib Samsung waa habka ugu fudud ee ay u adag tahay in dib aad telefoon, haddii aad taleefan ayaa xog muhiim ah in aad aadan awoodi karin in laga badiyo, waa in aad dib ilaa macluumaadka ka hor inta adag resetting.
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Google Nexus in Android
Sida loo xogta ka Samsung wareejiyo Blackberry
Sidee si ay u gudbiyaan Music si aad Android
A Guide Full on Sida loo soo dajiyo / uninstall / Update HTC u hagaagsan (Manager)
Sida loo isticmaalo Manager HTC nidaameed in dib iyo Soo Celinta HTC
Sida loo kaabta Motorola Droid Razr / Moto X / XOOM
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Nokia in HTC
> Resource > Android > Waxyaabaha aadan aqoon About Samsung Warbixannada Code